जीवनशैली – Page4– Pkr Dainik – A complete Nepali News Portal जीवनशैली – Page4– Pkr Dainik – A complete Nepali News Portal
अहिले धेरैलाई उच्च रक्तचाप छ, मोटोपन छ, कोलेस्ट्रोलको समस्या छ । यी समस्याहरूले हृदयाघातको जोखिम बढाएको छ । त्यसैपनि जाडो मौसम मुटु रोगीका लागि अनुकूल मानिँदैन । बाह्य चिसोको कारण नसाहरु खुम्चने वा साँघुरिने हुन्छ…
सम्बन्ध एकपटक गठन गरेर मात्रै हुँदैन । यसलाई जारी राख्न र नियमित गराउनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि सम्बन्धलाई बलियो र राम्रो बनाउनको लागि सम्बन्धमा लापरवाही र एकअर्कालाई ध्यान नदिनुले अक्सर सम्बन्धमा कमजोरी ल्याउँछ…
काठमाडौं । यौन आवश्यकता दुनियाभरका युवायुवतीहरुमा हुने एउटा प्राकृतिक आवश्यकता हो । भिन्नभिन्न पृष्ठभूमिले गर्दा कोही मान्छे यौनमा बढी भोगी हुन्छन् भने कोही यस मामलामा कम इच्छुक हुने गर्छन् । तर यो सबैको लागि अनिवार्य…
हामी साथीभाईमाझ, सभा–समारोहमा नारी अधिकार एवं लिंगभेद विरुद्ध ठूल–ठूला कुरा गर्छौं । तर, आफ्नै घरमा हुर्किरहेका छोरोलाई जुठो भाँडा उठाउने, माझ्ने, कुचो लगाउने, लुगा धुने काम सिकाउँछौं ? चाहे घरायसी कामकाजमा होस् वा खेलौनाको छनौटमै,…
कोरोना भाइरस कसरी सर्छ ? यो मुख्यत: श्वास–प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने गर्छ । हामीले खोक्दा, हाच्छियुँ गर्दा, सासफेर्दा, बोल्दा हाम्रो श्वास प्रणालीबाट सूक्ष्मथोपा निस्कन्छन् र कोभिड–१९ बाट संक्रमित व्यक्तिको हकमा त्यस्ता सूक्ष्मथोपामा यी भाइरस पनि हुन्छन् र उसको…
हरेक महिला आफ्नो पार्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने खाल को होस् भन्ने चाहान्छन त्यसैले युवतीहरु आफु भन्दा अलि बढी नै उमेर भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन तर कोहि युवती…